प्रचण्ड किन बने ओलीसंग असन्तुष्ट ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
प्रचण्ड किन बने ओलीसंग असन्तुष्ट ?
नेकपाभित्र राजदूत नियुक्ति प्रकरणले असन्तुष्टि जन्माएको छ। सरकारले पार्टीको सल्लाहविना राजदूत नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतलगायतका नियुक्ति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहबिना गरेपछि बिहीबार हुने भनिएको दुई अध्यक्षको भेटघाटसमेत रोकियो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाको राजदूतमा क्रमशः निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र डा। युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नेगरी सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै दाहालले बिहीबारको भेट रद्द गरेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत नियुक्तिमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष वा अन्य सचिवालय सदस्यहरुसँग कुनै पनि परामर्श गरेका थिएनन्। यसअघि ६ महिना लामो विवाद टुंग्याउने प्रयासस्वरुप स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय महत्वका नियुक्तिहरु दुई अध्यक्षको परामर्श एवं सचिवालय सदस्यहरुको सल्लाहमा गर्ने निर्णय भदौ २६ गते गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाको राजदूतमा क्रमशः लोकदर्शन रेग्मी र डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नेगरी सिफारिस गरेपछि दाहालले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वनिर्धारित भेट रद्द गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
प्रकाशित मिति : आश्विन १६, २०७७ शुक्रबार ९ : ४१ बजे
एमाले फेरि एक्लै चुनावमा जान्छ, प्रचण्ड र माधवजस्ता नक्कली कम्युनिष्टसँग एकता हुँदैन : प्रदिप ज्ञवाली
निर्वाचनमा पराजित भएपछि पहिलो पटक बोले केशव स्थापितले के भने ?